मुक्तिनाथ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १५ मंसिर २०७७)
यस कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रु. २९ करोड ४१ ५९ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष कम्पनीले २८ प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो ।
गत वर्ष यस कम्पनीको यो अवधिमा रु. २२ करोड ८७ लाख ६४ हजार खुद नाफा थियो । यस वर्ष खुद ब्याज आम्दानी बढेसँगै कम्पनीका नाफा बढ्नमा सहयोग मिलेको हो । गत वर्ष रु. ५२ करोड ३६ लाखभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा यस वर्ष रु. ५९ करोड ६ लाखभन्दा बढी खुद ब्याज आम्दानी कम्पनीले गरेको छ ।
पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रु. १५ करोड २१ लाख ९१ हजार रहेको छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रु. २७ दशमलव २१ रहेको यस कम्पनीले हालसम्म गत आर्थिक वर्षको लाभांश सार्वजनिक गरेको छैन । आइतबार कम्पनीको शेयर मूल्य रु. ३९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रु. ४३३ कायम भएको छ ।
कम्पनीको ५८ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिन सेतो मारुबोजू बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ८६ दशमलव ६३ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप बढी रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन १८ दशमलव ५६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम र प्रतिफल पनि कमै प्राप्त हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढा छ । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । आइतबारको शेयर मूल्य रु. ४३३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ३८४ मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यस दिनको शेयर मूल्य ५८ कारोबार दिनयताकै उच्च हो ।
कामना सेवा विकास बैंक : कम्पनी प्रोफाइल (मंगलवार, १३ माघ २०७७)[२०७७ माघ, १३]
पोखरा फाइनान्स : कम्पनी प्रोफाइल (मंगलवार, १३ माघ २०७७)[२०७७ माघ, १३]
गरिमा विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १२ माघ २०७७)[२०७७ माघ, १२]
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १२ माघ २०७७)[२०७७ माघ, १२]